Mitantara ny zava-nisy ilay tovolahy. « Nandeha nitsangantsangana teny amina toeram-pandraisam-bahiny iray afaka an’i Fenoarivo, manamorona ny lalam-pirenena voalohany iny izahay tamin’ny sabotsy heriny. Nony avy nilomano tamin’ny «piscine» dia nisakafo sy nisotro ranom-boankazo ary nifampizara teny mamy narahina safosafo sy fakan-tsary teo. Nibitsika ahy mangina teo an-tsofiko izy nanontany hoe : -“Raha sanatria maty aho dia ataonao inona ny sariko be dia be anaty findainao ?”. – Navaliako izy fa tehiriziko. Izaho kosa raha nanontany azy izany dia novaliany fa hofafany tanteraka », hoy i José.
Ny alatsinainy taorian’io vao maraina anefa dia nahazo antso tamin’ny mpiray tampo tamin’ilay tovovavy i José fa narary tampoka ny fofombadiny. Olona torana hoentina fiarakaretsaka hihazo hopitaly no novantaniny. Nony tonga tamin’ny hopitaly, notsapain’ny dokotera dia nilaza ity farany fa “Efa tsy namantsika intsony izy fa mahaiza mionona”. Mafy tamin’ilay tovolahy ny niatrika izany hatramin’ny fandevenana ary amin’ny fotoana hanoratana ny vaovao, milaza ihany izy fa na efa avy nandevina aza mbola sarotra ho azy ny mino fa maty ny ho saika vadiny.